I-China L-Threonine CAS 72-19-5 yeeFarma Grade (USP) abavelisi kunye nabathengisi | Ndiyabulela
Igama lemveliso:: L-Threonine
Njengokondla okunezondlo, i-L-threonine (Isifinyezo se-Thr) ihlala ifakwa kwifolokhwe yehagu kunye neenkukhu. Yeyesibini isithintelo se-amino acid ekondliweni kweehagu kunye neyesithathu ekunciphiseni i-amino acid kukutya kweenkukhu.
1. Isetyenziswa ikakhulu njengesongezelelo sokutya.
2. Isetyenziswa njengesongezelelo sesondlo sokondla. Ihlala ifakwa kwifula yehagu kunye neenkukhu. Yeyesibini isithintelo se-amino acid ekondliweni kweehagu kunye neyesithathu ekunciphiseni i-amino acid kukutya kweenkukhu.
3. Isetyenziswa njengesongezo sesondlo kwaye isetyenziselwa ukulungiswa kwegalelo le-amino acid.
4. Isetyenziswa kunyango lwe-adjuvant lwe-peptic ulcer kwaye ikwasetyenziswa ekunyangeni i-anemia, i-angina, i-aortitis, ukungoneliseki kwentliziyo kunye nezinye izifo zenkqubo ye-cardiovascular system.
I-L-Threonine yenziwa yi-microbial Fermentation ene-glucose njengezinto ezingafunekiyo, kwaye emva koko iyacokiswa emva kokuhluza inwebu, uxinzelelo, isikristali, ukomisa kunye nezinye iinkqubo. Ngokusekwe kwimboniselo ye-microbial, i-L-threonine ikhuselekile kwaye ithembekile ngaphandle kwentsalela esecaleni enetyhefu kwaye iyafumaneka kuhlobo lokondla (kubandakanya nokutya okujolise kumashishini okuthumela ngaphandle) kusetyenziso olukhuselekileyo. Njenge-amino acid ebalulekileyo, i-L-Threonine isetyenziswa ngokubanzi kwizongezelelo zokutya, izongezo zokutya kunye neyeza njalo njalo.
Njengokongezwa kwesondlo, i-L-threonine sisixhobo esinamandla esinceda ukuphucula umgangatho wokutya kunye nokunciphisa iindleko zokutya zabavelisi bokutya. I-L-Threonine yongezwa kakhulu kukutya kwehagu, ukutya kwehagu, ukutya kwenkukhu, ukutya kwe-shrimp kunye ne-eel ngokudibeneyo ne-lysine ngokubanzi. I-L-Threonine idlala indima yayo ngeendlela ezininzi njengokuncedisa ekwakheni ulungelelwaniso lwee-amino acid ukukhawulezisa ukukhula, ukuphucula umgangatho wenyama, ukufumana ubunzima kunye nokuthembela kwipesenti yenyama, ukuthoba umlinganiso wokuguqula ukutya, ukulola ixabiso lesondlo lokutya okunokugaya okungafunekiyo kwe-amino acid, ukunceda konga izibonelelo zeeproteni kwaye unciphise iindleko zokutya ngokucoca iiprotein ezongezwe kukutya, ukunciphisa i-nitrogen ekhutshwe kumgquba wemfuyo, umchamo kunye nokuxinana kwe-ammonia kunye nenqanaba lokukhululwa kwemfuyo kunye neeshedi zeenkukhu, kunye negalelo lokudibanisa izilwanyana ezincinci ' amajoni omzimba ukuxhathisa izifo.
Uvavanyo 98.5% ~ 101.5%
Ixabiso le-PH 5.0 ~ 6.5
Ukuphulukana nokomisa ≤0.2%
Intsalela kwi ucinezelo ≤0.4%
Amanzi aMandla (njenge-Pb) 0.0015%
Ezinye iiamino acid Uyangqinelana
Ujikelezo oluthile -26.7 ° ~ -29.1 °
Egqithileyo I-L-Methionine CAS 63-68-3 kwiBakala lePharma (USP)
Okulandelayo: I-L-Isoleucine CAS 73-32-5 yeBakala yePharma (USP / EP)
L-Threonine kwiBakala lokutya, Ikhemesti yeBakala L-Leucine, 73-32-5 L-Isoleucine, I-L-Valine 72-18-4, L-Threonine Pharm kwiBakala, Ukutya kwezilwanyana,